နာမည်ကြီးသွားတဲ့ ထိုတစ်ည အစ/အဆုံး (ကြောက်တတ်သူများ မဖတ်ရ) - APANNPYAY
Home / ပရလောကအကြောင်း / နာမည်ကြီးသွားတဲ့ ထိုတစ်ည အစ/အဆုံး (ကြောက်တတ်သူများ မဖတ်ရ)
နာမည်ကြီးသွားတဲ့ ထိုတစ်ည အစ/အဆုံး (ကြောက်တတ်သူများ မဖတ်ရ)
Apann Pyay 7:04 PM ပရလောကအကြောင်း Edit
မိုးမှာ သည်းကြီးမဲကြီး ရွာသွန်းနေလျှက် လေများကလည်း အဆက်မပြတ်တိုက်ခတ်နေသောကြောင့် လေသံနှင့်မိုးသံ တို့မှာရောနှောလျက်ရှိသည်။
ထိုအချိန်မှာ ည၁၁နာရီထိုးလုခါနီးအချိန် ဖြစ်သည်။
ပတ်ဝန်းကျင်ကလည်းတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေကြပြီ။သို့သော် မိုးကတော့ တိတ်မည့်ပုံမပေါ်သေး။ ကျွန်တော့်တွင် တစ်ကိုယ်လုံးကို လုံစေသော မိုးကာအကျီင်္ရှည်ကြီးတစ်ထည်နှင့် လက်နှိပ်ဓါတ်မီးတလက်မှလွဲ၍ ဘာမျှမပါပေ။
ဘူတာရုံသို့သွားရာလမ်းမှာလည်း မြေနီလမ်းလေးဖြစ်သည့် အလျှောက် မိုးရွာသည့်အခါ ရွှံ့ဗွက်များနှင့်ထူထပ်နေပေသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ အရေးကြီးသည်က ဘူတာရုံသို့မြန်မြန်ရောက်ဖို့ပင်။
ဒီကနေ့ည၁၁နာရီကောင်နှင့်ကျွန်တော့်အမေလိုက်ပါလာမည်ဖြစ်သည်။အမေကမျက်စိမကောင်းသည့်အပြင် မိန်းမသားတစ်ဦးတည်းမို့ ယခုလိုညကြီးအချိန်မတော် မိုးသည်းထဲတွင် ဘူတာရုံသို့ ကျွန်တော်လာရောက်စောင့်ကြိုရခြင်းဖြစ်သည်။
မကြာမီ ပိန်းပိတ်အောင်မှောင်နေသော ပတ်ဝန်းကျင် ထဲမှ မထင်ရှားသည့် ၀ိုးတိုးဝါးတား အရာတစ်ခုကိုစတင်မြင်လိုက်ရသည်။
ထိုအရာကိုမြင်မှ ကျွန်တော်အားတက်သွားမိသည်။ဟုတ်ပါသည်။ထိုအရာမှာကျွန်တော်တို့ရွာလေး၏ ရထားဘူတာရုံလေး။မိုးကလည်းတအားရွာနေသည်မို့ ခိုက်ခိုက်တုန်အောင်ချမ်းနေပြီဖြစ်သည်။ထို့ကြောင့် ဘူတာရုံသို့ ခပ်သွက်သွက်လေးသုတ်ချေတင်လာလိုက်သည်။
ဘူတာရုံထဲကိုရောက်တော့ တဲမှာလူသူအရိပ်အယောင်လုံးဝမတွေ့ရ။လူတစ်ယောက်တစ်လေတော့ရှိတန်ကောင်းပါရဲ့ဆိုပြီးရှာဖွေကြည့်ပြန်တော့လည်း လူမပြောနှင့် လူရိပ်မြင်၍ ဟောင်မည့်ခွေးတစ်ကောင်ပင်မတွေ့ရချေ။မိုးမှာလည်းပို၍ပင် သည်းလာသည်ဟုထင်ရသည်။
ဘူတာရုံစောင့်အဘိုးကြီးကရော ဘယ်ရောက်နေတာလဲ။မိုးအေးအေးဖြင့်ကွေးနေပြီလား။နာရီကြည့်လိုက်တော့၁၁နာရီတောင်ကျော်နေပြီ။တကယ်ဆို ဘူတာရုံမှာရထားစီးခရီးသည်မရှိရင်တောင်မှ ဈေးသည်တဦးတလေတော့ရှိသင့်တယ်လေ။အခုဟာက လုံးဝတိတ်ဆိတ်ခြောက်ကပ်နေပြီး စိတ်ခြောက်ခြားဖွယ်ရာအတိပဲ။
"အောင်မလေးဗျ… … … …"
ဆံပင် မျက်ခုံးမွှေး နှုတ်ခမ်းမွှေး မုတ်ဆိတ်မွှေးများက ဆွတ်ဆွတ်ဖြူနေသည်။
"ကောင်လေး မင်း ဘာလာလုပ်တာလဲ"
"ဟကောင်ရ …ငါမင်းကိုဒီနေရာကနေကြည့်နေတာကြာပြီ မင်းဒီကို တစ်ယောက်ထဲဘာလာလုပ်တာလဲ"
"အေး ဟုတ်တယ် ပဲခူးမှာလည်းမိုးတအားရွာပြီး ရထားလမ်းတွေရေကျော်နေလို့ ခရီးစဉ်ဖြတ်ထားတယ် မနက်၎နာရီကောင်တော့ ဆိုက်မယ်"
"လာတုံးကတော့တစ်ယောက်ထဲပေါ့ ဒါပေမယ့်အပြန်ကျရင် အမေပါမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဆောင်နေတော့ ဘာမှမဖြစ်ဘူးဗျ…အခုကတစ်ယောက်ထဲပြန်ရမှာ…အချိန်ကလည်းလင့်နေပီ"
"ဘာလဲ ကောင်လေး မင်းကသရဲကြောက်လို့လား"
"မင်းစိတ်ဓါတ်ကိုတော့ ကြိုက်သွားပီကောင်လေးရေ…မင်းပြောသလိုပဲ လောကမှာ သရဲဆိုတာကြောက်စရာမကောင်းပါဘူးကွာ…သူတို့ကသနားစရာလေးတွေပါ"
"ငါက အသက်ကြီးပီလေကွာ ဒီလိုအချိန်မျိုးဘယ်အိပ်ချင်သေးပါ့မလဲ သက်ကြီးခေါင်းချချိန်ဆိုတာမင်းကြားဖူးမှာပေါ့ "
"အေး ကောင်လေး မင်းဒီအချိန်တစ်ယောက်ထဲပြန်ရင်လမ်းမှာ တောဆင်တွေနဲ့တွေ့နေဦးမယ် မင်းအဆင်ပြေမယ်ဆို မနက်၎နာရီကောင်ဝင်မှ မင်းအမေပါမပါကြည့်ပြီး ပြန်ပါ့လား ပါလာတော့လဲ အခန့်သင့်တာပေါ့ကွာ"
ဦးဘတင့်ပြောတာလဲ သဘာဝကျသည်။ကျွန်တော်တို့ရွာနဲ့ ဘူတာရုံနဲ့ကြားမှာ ကြံတောကြီးရှိသည်။ထိုတောထဲသို့ယခုလိုညအချိန်မတော်ဆိုလျှင် တောဆင်တွေက ကြံဝင်စားတတ်ကြသည်။ကျွန်တော်ကြောက်သည်ကလည်း ထိုတောဆင်တွေကိုပင်ဖြစ်သည်။ကျွန်တော်တို့ရွာက လူအချို့မှာ တောဆင်နင်းခံရပြီး အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရသည်ဖြစ်၍ မကြောက်လို့မရပေ…။
ထို့ကြောင့် ရွာသားအားလုံးတစ်ယောက်ထဲဆိုလျှင် မည်သူုမျှမသွားဝံ့။အရေးတကြီးသွားစရာရှိလျှင် အနည်းဆုံးနှစ်ယောက်လောက်ရှိမှသွားတတ်သည်။
ကျွန်တော်လာတုံးကလည်းဦးလေးကစိတ်မချသဖြင့်မှာလိုက်သေးသည်။သို့ပေမယ့် ကျွန်တော်ရွာထဲကထွက်လာချိန်က ဤမျှလောက်ညမနက်သေးသဖြင့် သိပ်မစိုးရိမ်ခဲ့မိ။
"ကျွန်တော်လဲ အဲ့ဒါပဲစဉ်းစားနေတာဗျ အခုက ၁၁နာရီခွဲနေပြီ နောက် သုံးနာရီလောက်ဆို ၄နာရီကောင်လဲဆိုက်မှာဆိုတော့ ဦးဘတင့်ပြောသလိုအဲ့တော့မှပြန်တာကောင်းမယ်ထင်တယ်… မိုးတွေကလည်းတအားရွာနေတော့လေ"
"အဲ့ဒါငါပြောတာပေါ့ …ဒီမယ် ကောင်လေး မင်းဘာမှစိတ်မပူနဲ့ မင်းမပြန်ခင်အချိန်ထိငါနဲ့စကားထိုင်ပြောကြတာပေါ့ကွာ ငါလဲတယောက်ထဲဖြစ်နေတော့ စကားပြောဖော်ကလည်းမရှိဘူးဟေ့"
"ဟုတ်ကဲ့ ဦးဘတင့် ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ် သက်ကြီးစကားသက်ငယ်ကြားရတော့ ကျွန်တော်လဲဗဟုသုတရတာပေါ့ ပြီးတော့ ဒီတိုင်းထိုင်စောင့်နေမယ့်အတူတူ စကားပြောနေတော့အပျင်းပြေတာပေါ့"
"ကောင်းသကွာ လာ ကောင်လေး အထဲဝင် အပြင်မှာအရမ်းအေးတယ် "
ဦးဘတင့်ကြီးရဲ့ ဖိတ်ခေါ်မှုကြောင့် လက်မှတ်ရောင်းသော ကောင်တာခန်းတွင်းသို့ ကျွန်တော်ဝင်သွားလိုက်သည်။
အခန်းတွင်းရောက်တော့မှ အချမ်းဓာတ်အနည်းငယ်သက်သာရ ရလေသည်။
"ကောင်လေး ငါ့မှာလဲ ဧည့်ခံစရာဆိုလို့ ရေနွေးကြမ်းပဲရှိတယ်ကွာ ရော့…အချမ်းပြေရေနွေးကြမ်းလေးသောက်"
"ရပါတယ်ဦးဘတင့်ရယ် ရေနွေးကြမ်းလည်း အချမ်းပြေတာပါပဲ ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါတယ်"
ဘူတာရုံလေး၏ အပြင်ဖက်တွင် သေလုမျောပါး ပိန်းကြာပင်များနှင့် အတိုင်းအဆမရှိ သန်စွမ်းနေကြသော ပေါင်းပင်ကြီးများသည် မိုးဒဏ်လေဒဏ်ကြောင့် ပစ်စလတ်ခတ်ယိမ်းထိုးနေကြလေသည်။
ရေနွေးကြမ်းတငုံကိုဟန်ပါပါတကျိုက်သောက်လိုက်ပြီး သူသောက်နေကျ ဆေးပေါ့လိပ်အားမီးညှိကာ အားရပါးရဖွာရှိုက်နေလေသည်။
ထို့နောက် ကျွန်တော်ကပင် စကားစလိုက်သည်..။
ကျွန်တော်ထိုသို့မေးတော့ ဦးဘတင့်က ကျွန်တော့်ကိုသေချာကြည့်သည်။
"ဘာကိုမှမဆိုလိုပါဘူး ဦးဘတင့်ကြီးခုနကပြောတယ်လေ…သရဲတွေကကြောက်စရာမကောင်းပါဘူး သနားဖို့ကောင်းတယ်ဆိုလို့ ကျွန်တော်ကမေးကြည့်တာပါ"
"အော်…ဒါလား…မင်းမေးတော့လဲ ငါကပြောပြရတာပေါ့ကွာ…ငါအခုအသက်၇၀ကျော်ပြီ ငါအသက်၃၅နှစ်ထဲက ဒီဘူတာမှာ ဘူတာစောင့်လုပ်လာခဲ့တာကွ"
ဦးဘတင့်က သူ၏ စကားကိုခေတ္တရပ်နား၍ ရေနွေးကြမ်းတစ်ကျိုက်မော့ချလိုက်သည်။ထို့နောက်ဆက်လက်၍…
"ငါဘူတာရုံစောင့်လုပ်ခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီနှစ်ပေါင်း ၃၅နှစ်ကျော်အတွင်းမှာ သရဲတစ္ဆေ ပရလောကသားတွေနဲ့လဲကြုံဖူးတာပေါ့ကွာ…"
"ဒါပေါ့ ကောင်လေးရ…သိပ်အခြောက်ခံခဲ့ရဖူးတာပေါ့ …အဟား…ဟား…ဟား…ဟား"
ဦးဘတင့်ကြီး၏ စကားအဆုံးတွင် ရီလိုက်သည့်အသံက ခြောက်ကပ်ကပ်နိုင်လွန်းနေသည်ကို ကျွန်တော်သတိထားမိသည်။
"ဘယ်လိုများ အခြောက်ခံခဲ့ရတာလဲ ပြောပြပါလား…"
"အေး…ငါမှတ်မိသလောက်တွေပြောရရင်တော့ ငါဒီဘူတာမှာစလုပ်ပြီး တပတ်လောက်မှာဖြစ်လိမ့်မယ် အဲ့မှာစအခြောက်ခံရတာပဲ……
အဲ့ညမှာငါက တာဝန်အရရုံထဲလှည့်ပတ်စစ်ပြီးတော့ ငါ့အတွက်ပေးထားတဲ့အခန်းလေးထဲဝင်ထိုင်နေတာပေါ့ကွာ…ပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းဆေးပေါ့လိပ်ဖွာနေတယ်ပေါ့…အဲ့ဒီအချိန်မှာငါ့အခန်းရှေ့ကိုလူတစ်ယောက် ရောက်လာတယ်…
အဲ့ဒီအချိန်ကလဲ ဘူတာရုံထဲမှာ ရထားစီးမယ့်ခရီးသည်တွေဈေးသည်တွေလဲရှိတော့ ငါလဲအကူအညီတခုခုလိုလို့လာမေးတာထင်ပြီး
ပထမတော့ ငါဇဝေဝါဖြစ်သွားတယ်……ပြီးမှတဖြည်းဖြည်းပြန်စဉ်းစားတော့ သူရပ်နေတဲ့ တံခါးဝနဲ့ငါထိုင်နေတဲ့နေရာက လေး ငါးပေလောက်ဝေးနေသဟ…
တွေးနေတုံးပဲရှိသေးတယ် သူ့လက်ကြီးကငါ့ဆီရှည်ထွက်လာပြီးဆေးပေါ့လိပ်ပြန်ပေးတယ်… ပြီးလဲပြီးရော ကျေးဇူးပဲနော်တဲ့ ပြောပြီးထွက်သွားပါလေရော…"
"အားပါးပါး……… ဦးဘတင့်ကြီး အဲ့တုံးကမကြောက်ဘူးလား"
"ဟ…ကောင်လေးရ… နောက်နေ့ငါ လန့်ဖျားဖျားတာခွင့်နှစ်ပါတ်ယူလိုက်ရပါလေရောလား"
ဦးဘတင့်၏ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် အက်ရှရှရီသံကြီးကြောင့် ကျွန်တော် ကြက်သီးမွေးညှင်းများပင် ထသွားသည်။
"အချိန်ကုန်တာကြာလို့ဆိုပြီး တွေးမနေစမ်းပါနဲ့ကွာ "
"ဟင်! ကျွန်တော်တွေးနေတာကို ဦးဘတင့်က ဘယ်လိုသိတာလဲ…"
"ကောင်လေးရာ မင်းငယ်ပါသေးတယ်…ငါအသက်၇၀ကျော်နေပြီ…ငါလူပေါင်းများစွာနဲ့ကြုံခဲ့ဖူးတယ် အဲ့တော့ လူတွေရဲ့စိတ်ကိုလဲ မျက်နှာကြည့်ရုံနဲ့ ခန့်မှန်းတတ်တာမဆန်းပါဘူးကောင်လေးရာ…"
ထိုသို့ပြောပြီးနောက် သူ၏ ဆေးပေါ့လိပ်အား တရှိုက်မတ်မတ်စွဲလန်းနှစ်ခြိုက်စွာ ဖွာရှိုက်နေပြန်လေသည်။
ှီုီုဦးဘတင့်ကြီးကို ဒီနေ့ကြည့်ရတာအရင်နေ့တွေနှင့်မတူ ထူးခြားနေသလိုကျွန်တော်ခံစားနေမိသည်။ဘာထူးခြားနေသည်တော့ ကျွန်တော်လဲပြောမပြတတ်ပေ။
ဂီးးးးးးးး ခနဲအော်မြည်ကာ ပျံသန်းသွားသော ငှက်ဆိုးတစ်ကောင်၏ အသံကြားမှ ကျွန်တော် အသိပြန်ဝင်လာသည်။
"အေးလေ မင်းနဲ့ငါ စကားပြောနေရင်းနဲ့ ငါအပေါ့ခဏသွားတယ်လေ…ငါပြန်လာတော့ မင်းအိပ်ပျော်နေတာပဲ"
ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့အပြားမှလည်း နာကျင်ကိုက်ခဲမှု အချို့ကို ခံစားနေရသည်။ပိုဆိုးသည်ကှီုးဘတင့်ပြောသွားသလို သူအပေါ့သွားတာကိုလည်းကျွန်တော်မမှတ်မိ။
ကျွန်တော့်စိတ်ထဲတွင်စဉ်းစားနေသောအကြောင်းအရာကို ဦးဘတင့်ကြီးသိနေသဖြင့် ဦးဘတင့်အပေါ် မသင်္ကာဖြစ်မိခြင်းပင်…။
"ကျွန်တော် ကိုယ်တွေလက်တွေ အရမ်းကိုက်ခဲနေတယ်ဗျာ…ပြီးတော့ ခေါင်းတွေလဲမူးနေတယ်…ဖျားချင်နေပြီလားမသိဘူး"
"အိပ်ရေးပျက်လို့နေမှာပါကွာ…ကဲ…ကဲ ကောင်လေး ၄နာရီကောင်ဆိုက်တော့မယ်…အဆင်သင့်လုပ်ထားတော့…"
နာရီကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ မနက်၎နာရီထိုးဖို့မိနစ်အနည်းငယ်မျှပင်လိုတော့သည်။ထို့ကြောင့် အချိန်ဆွဲမနေတော့ပဲ လက်မှတ်ဖြတ်သောကောင်တာခန်းလေးအတွင်းမှ ကျွန်တော်ထွက်လာလိုက်တော့သည်။
များမကြာမီအချိန်အတွင်း၌ ရထားဥသြဆွဲသံသဲ့သဲ့အား ကြားရလေသည်။
မောင်ထွန်းဇော်လေး တစ်ယောက် ၄နာရီရထားဆိုက်ပီးကတည်းက ပျောက်သွားလိုက်တာ ကျွန်ုပ်ကိုပင် နှုတ်ဆက်မသွားတော့…
သူ့မိခင်နှင့်တွေ့၍ ဝမ်းသာအားရဖြစ်ကာ ကျွန်ုပ်အားဝင်နှုတ်ဆက်ရန်မေ့လျော့သွားခြင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုယူဆပြီး ကျွန်ုပ်လုပ်စရာရှိသည်များကို လုပ်ကိုင်နေလိုက်လေသည်။
ထိုအချိန်၌ လူတချို့စုရုံးစုရုံးဖြစ်ကာ တစုံတခုအားအရေးတကြီးပြောဆိုနေကြသည်ကိုတွေ့မြင်ရသဖြင့် ကျွန်ုပ်၏ စူးစမ်းတတ်သော ဥာဉ်အရ ထိုလူအုပ်အနီးသို့ ချဉ်းကပ်ကာ နားထောင်ကြည့်မိသည်။
"ဟုတ်တယ်ဗျ…ထွန်းဇော်မှ ထွန်းဇော် အစစ်ပဲ…ကြံတောထဲမှာ သေနေတာ မြင်ရက်စရာတောင်မရှိဘူး…"
"ဟုတ်လိမ့်မယ်ဗျာ ကောင်လေးကတော့ သနားစရာပဲ ဘယ်အချိန်ထဲကသေနေလဲမသိဘူး…သူ့ဦးလေးက သူ့အစ်မ( ထွန်းဇော်အမေ) ကိုသွားကြိုတာကြာလို့စိတ်မချလို့လိုက်ကြည့်တော့မှ ကြံတောထဲမှာသေနေတာတွေ့တာတဲ့ဗျာ…"
ကျွန်ုပ်နှင့်ညကတချိန်လုံးစကားပြောနေသောထွန်းဇော်တော့ဖြစ်ဟန်မထင်။ကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်တောင် ထွန်းဇော်အား တောဆင်နှင့်တိုးမည်စိုး၍ အိမ်မပြန်ရန်တားမြစ်ခဲ့သေးသည်။ထို့ကြောင့် သေချာစေရန် မေးမြန်းကြည့်လိုက်သည်။
"လူလေးတို့…လူလေးတို့ပြောနေတဲ့ထွန်းဇော်ဆိုတာ မြို့တက်ပြီးသနပ်ခါးရောင်းတဲ့ မြကြည်ရဲ့သားလား"
သူတို့ပြောနေသော ထွန်းဇော်က ကျွန်ုပ်နှင့် တညလုံးရှိနေသည့် ထွန်းဇော်…။
ဘူတာရုံသို့ တစ်ယောက်ထဲလာခဲ့သော ထွန်းဇော်…။
ယခုတော့ ထွန်းဇော်မှာ ညကတည်းကပင် တောဆင်နင်းခံရလို့သေပြီတဲ့…။
ဒါဆို…ဒါဆို …ကျွန်ုပ်နှင့် ညက တညလုံးရှိနေခဲ့သည် ထွန်းဇော်က ………။
သြော်…ဒါ့ကြောင့်မို့ သူညက ကျွန်ုပ်ကို ပြောခဲ့တာကိုး …သူကိုယ်တွေလက်တွေ အရမ်းကိုက်နေတယ် ခေါင်းလဲ အရမ်းမူးတယ်တဲ့…
အခုကြားလိုက်ရတဲ့ သတင်းက ထွန်းဇော်တစ်ယောက် တောဆင်နင်းခံရတာ ခေါင်းလဲပွင့်သွားတယ် ခါးလည်းထက်ပိုင်းကျိုးသွားတယ်တဲ့…။
"ကောင်လေးရေ…ငါပြုသမျှကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေမင်းကို အမျှဝေပါတယ်…မင်းကြားရာအရပ်ကနေ သာဓုခေါ်ပါကွာ……………
ဦးဘတင့်ကြီး၏ ရုတ်တရက်အပြုအမူကြောင့် ရပ်စကားပြောနေသော လူတစ်စုမှာ ဦးဘတင့်ကြီးအား စိုက်ကြည့်နေကြလေသည်။
ထိုလူတစ်စုအပြင် ဦးဘတင့်ကြီးအားကြည့်၍ ဝမ်းသာအားရ သာဓုခေါ်နေသော တစုံတယောက်ရှိနေသည်ကို ဦးဘတင့် သိခဲ့ပါမူ………………………………………။ ။
ပြီးး ။ ။
Credit- ပရလောက၏ သည်းထိတ် ရင်ဖို ဖြစ်ရပ်များ
မိုးမှာ သညျးကွီးမဲကွီး ရှာသှနျးနလြှေကျ လမြေားကလညျး အဆကျမပွတျတိုကျခတျနသေောကွောငျ့ လသေံနှငျ့မိုးသံ တို့မှာရောနှောလကျြရှိသညျ။
ထိုအခြိနျမှာ ည၁၁နာရီထိုးလုခါနီးအခြိနျ ဖွဈသညျ။
ပတျဝနျးကငျြကလညျးတိတျဆိတျငွိမျသကျနကွေပွီ။သို့သျော မိုးကတော့ တိတျမညျ့ပုံမပျေါသေး။ ကြှနျတေျာ့တှငျ တဈကိုယျလုံးကို လုံစသေော မိုးကာအကြီင်ျရှညျကွီးတဈထညျနှငျ့ လကျနှိပျဓါတျမီးတလကျမှလှဲ၍ ဘာမြှမပါပေ။
ဘူတာရုံသို့သှားရာလမျးမှာလညျး မွနေီလမျးလေးဖွဈသညျ့ အလြှောကျ မိုးရှာသညျ့အခါ ရှံ့ဗှကျမြားနှငျ့ထူထပျနပေသေညျ။ မညျသို့ပငျဖွဈစေ အရေးကွီးသညျက ဘူတာရုံသို့မွနျမွနျရောကျဖို့ပငျ။
ဒီကနညေ့၁၁နာရီကောငျနှငျ့ကြှနျတေျာ့အမလေိုကျပါလာမညျဖွဈသညျ။အမကေမကျြစိမကောငျးသညျ့အပွငျ မိနျးမသားတဈဦးတညျးမို့ ယခုလိုညကွီးအခြိနျမတျော မိုးသညျးထဲတှငျ ဘူတာရုံသို့ ကြှနျတျောလာရောကျစောငျ့ကွိုရခွငျးဖွဈသညျ။
မကွာမီ ပိနျးပိတျအောငျမှောငျနသေော ပတျဝနျးကငျြ ထဲမှ မထငျရှားသညျ့ ဝိုးတိုးဝါးတား အရာတဈခုကိုစတငျမွငျလိုကျရသညျ။
ထိုအရာကိုမွငျမှ ကြှနျတျောအားတကျသှားမိသညျ။ဟုတျပါသညျ။ထိုအရာမှာကြှနျတျောတို့ရှာလေး၏ ရထားဘူတာရုံလေး။မိုးကလညျးတအားရှာနသေညျမို့ ခိုကျခိုကျတုနျအောငျခမျြးနပွေီဖွဈသညျ။ထို့ကွောငျ့ ဘူတာရုံသို့ ခပျသှကျသှကျလေးသုတျခတြေငျလာလိုကျသညျ။
ဘူတာရုံထဲကိုရောကျတော့ တဲမှာလူသူအရိပျအယောငျလုံးဝမတှရေ့။လူတဈယောကျတဈလတေော့ရှိတနျကောငျးပါရဲ့ဆိုပွီးရှာဖှကွေညျ့ပွနျတော့လညျး လူမပွောနှငျ့ လူရိပျမွငျ၍ ဟောငျမညျ့ခှေးတဈကောငျပငျမတှရေ့ခြေ။မိုးမှာလညျးပို၍ပငျ သညျးလာသညျဟုထငျရသညျ။
ဘူတာရုံစောငျ့အဘိုးကွီးကရော ဘယျရောကျနတောလဲ။မိုးအေးအေးဖွငျ့ကှေးနပွေီလား။နာရီကွညျ့လိုကျတော့၁၁နာရီတောငျကြျောနပွေီ။တကယျဆို ဘူတာရုံမှာရထားစီးခရီးသညျမရှိရငျတောငျမှ စြေးသညျတဦးတလတေော့ရှိသငျ့တယျလေ။အခုဟာက လုံးဝတိတျဆိတျခွောကျကပျနပွေီး စိတျခွောကျခွားဖှယျရာအတိပဲ။
"အောငျမလေးဗြ… … … …"
ဆံပငျ မကျြခုံးမှေး နှုတျခမျးမှေး မုတျဆိတျမှေးမြားက ဆှတျဆှတျဖွူနသေညျ။
"ကောငျလေး မငျး ဘာလာလုပျတာလဲ"
"ဟကောငျရ …ငါမငျးကိုဒီနရောကနကွေညျ့နတောကွာပွီ မငျးဒီကို တဈယောကျထဲဘာလာလုပျတာလဲ"
"အေး ဟုတျတယျ ပဲခူးမှာလညျးမိုးတအားရှာပွီး ရထားလမျးတှရေကြေျောနလေို့ ခရီးစဉျဖွတျထားတယျ မနကျ၎နာရီကောငျတော့ ဆိုကျမယျ"
"လာတုံးကတော့တဈယောကျထဲပေါ့ ဒါပမေယျ့အပွနျကရြငျ အမပေါမယျဆိုတဲ့စိတျကဆောငျနတေော့ ဘာမှမဖွဈဘူးဗြ…အခုကတဈယောကျထဲပွနျရမှာ…အခြိနျကလညျးလငျ့နပေီ"
"ဘာလဲ ကောငျလေး မငျးကသရဲကွောကျလို့လား"
"မငျးစိတျဓါတျကိုတော့ ကွိုကျသှားပီကောငျလေးရေ…မငျးပွောသလိုပဲ လောကမှာ သရဲဆိုတာကွောကျစရာမကောငျးပါဘူးကှာ…သူတို့ကသနားစရာလေးတှပေါ"
"ငါက အသကျကွီးပီလကှော ဒီလိုအခြိနျမြိုးဘယျအိပျခငျြသေးပါ့မလဲ သကျကွီးခေါငျးခခြိနျဆိုတာမငျးကွားဖူးမှာပေါ့ "
"အေး ကောငျလေး မငျးဒီအခြိနျတဈယောကျထဲပွနျရငျလမျးမှာ တောဆငျတှနေဲ့တှနေ့ဦေးမယျ မငျးအဆငျပွမေယျဆို မနကျ၎နာရီကောငျဝငျမှ မငျးအမပေါမပါကွညျ့ပွီး ပွနျပါ့လား ပါလာတော့လဲ အခနျ့သငျ့တာပေါ့ကှာ"
ဦးဘတငျ့ပွောတာလဲ သဘာဝကသြညျ။ကြှနျတျောတို့ရှာနဲ့ ဘူတာရုံနဲ့ကွားမှာ ကွံတောကွီးရှိသညျ။ထိုတောထဲသို့ယခုလိုညအခြိနျမတျောဆိုလြှငျ တောဆငျတှကေ ကွံဝငျစားတတျကွသညျ။ကြှနျတျောကွောကျသညျကလညျး ထိုတောဆငျတှကေိုပငျဖွဈသညျ။ကြှနျတျောတို့ရှာက လူအခြို့မှာ တောဆငျနငျးခံရပွီး အသကျဆုံးရှုံးခဲ့ကွရသညျဖွဈ၍ မကွောကျလို့မရပေ…။
ထို့ကွောငျ့ ရှာသားအားလုံးတဈယောကျထဲဆိုလြှငျ မညျသူုမြှမသှားဝံ့။အရေးတကွီးသှားစရာရှိလြှငျ အနညျးဆုံးနှဈယောကျလောကျရှိမှသှားတတျသညျ။
ကြှနျတျောလာတုံးကလညျးဦးလေးကစိတျမခသြဖွငျ့မှာလိုကျသေးသညျ။သို့ပမေယျ့ ကြှနျတျောရှာထဲကထှကျလာခြိနျက ဤမြှလောကျညမနကျသေးသဖွငျ့ သိပျမစိုးရိမျခဲ့မိ။
"ကြှနျတျောလဲ အဲ့ဒါပဲစဉျးစားနတောဗြ အခုက ၁၁နာရီခှဲနပွေီ နောကျ သုံးနာရီလောကျဆို ၄နာရီကောငျလဲဆိုကျမှာဆိုတော့ ဦးဘတငျ့ပွောသလိုအဲ့တော့မှပွနျတာကောငျးမယျထငျတယျ… မိုးတှကေလညျးတအားရှာနတေော့လေ"
"အဲ့ဒါငါပွောတာပေါ့ …ဒီမယျ ကောငျလေး မငျးဘာမှစိတျမပူနဲ့ မငျးမပွနျခငျအခြိနျထိငါနဲ့စကားထိုငျပွောကွတာပေါ့ကှာ ငါလဲတယောကျထဲဖွဈနတေော့ စကားပွောဖျောကလညျးမရှိဘူးဟေ့"
"ဟုတျကဲ့ ဦးဘတငျ့ ကြှနျတျောအဆငျပွပေါတယျ သကျကွီးစကားသကျငယျကွားရတော့ ကြှနျတျောလဲဗဟုသုတရတာပေါ့ ပွီးတော့ ဒီတိုငျးထိုငျစောငျ့နမေယျ့အတူတူ စကားပွောနတေော့အပငျြးပွတောပေါ့"
"ကောငျးသကှာ လာ ကောငျလေး အထဲဝငျ အပွငျမှာအရမျးအေးတယျ "
ဦးဘတငျ့ကွီးရဲ့ ဖိတျချေါမှုကွောငျ့ လကျမှတျရောငျးသော ကောငျတာခနျးတှငျးသို့ ကြှနျတျောဝငျသှားလိုကျသညျ။
အခနျးတှငျးရောကျတော့မှ အခမျြးဓာတျအနညျးငယျသကျသာရ ရလသေညျ။
"ကောငျလေး ငါ့မှာလဲ ဧညျ့ခံစရာဆိုလို့ ရနှေေးကွမျးပဲရှိတယျကှာ ရော့…အခမျြးပွရေနှေေးကွမျးလေးသောကျ"
"ရပါတယျဦးဘတငျ့ရယျ ရနှေေးကွမျးလညျး အခမျြးပွတောပါပဲ ကြှနျတျောအဆငျပွပေါတယျ"
ဘူတာရုံလေး၏ အပွငျဖကျတှငျ သလေုမြောပါး ပိနျးကွာပငျမြားနှငျ့ အတိုငျးအဆမရှိ သနျစှမျးနကွေသော ပေါငျးပငျကွီးမြားသညျ မိုးဒဏျလဒေဏျကွောငျ့ ပဈစလတျခတျယိမျးထိုးနကွေလသေညျ။
ရနှေေးကွမျးတငုံကိုဟနျပါပါတကြိုကျသောကျလိုကျပွီး သူသောကျနကြေ ဆေးပေါ့လိပျအားမီးညှိကာ အားရပါးရဖှာရှိုကျနလေသေညျ။
ထို့နောကျ ကြှနျတျောကပငျ စကားစလိုကျသညျ..။
ကြှနျတျောထိုသို့မေးတော့ ဦးဘတငျ့က ကြှနျတေျာ့ကိုသခြောကွညျ့သညျ။
"ဘာကိုမှမဆိုလိုပါဘူး ဦးဘတငျ့ကွီးခုနကပွောတယျလေ…သရဲတှကေကွောကျစရာမကောငျးပါဘူး သနားဖို့ကောငျးတယျဆိုလို့ ကြှနျတျောကမေးကွညျ့တာပါ"
"အျော…ဒါလား…မငျးမေးတော့လဲ ငါကပွောပွရတာပေါ့ကှာ…ငါအခုအသကျရဝကြျောပွီ ငါအသကျ၃၅နှဈထဲက ဒီဘူတာမှာ ဘူတာစောငျ့လုပျလာခဲ့တာကှ"
ဦးဘတငျ့က သူ၏ စကားကိုခတ်ေတရပျနား၍ ရနှေေးကွမျးတဈကြိုကျမော့ခလြိုကျသညျ။ထို့နောကျဆကျလကျ၍…
"ငါဘူတာရုံစောငျ့လုပျခဲ့တဲ့ အဲ့ဒီနှဈပေါငျး ၃၅နှဈကြျောအတှငျးမှာ သရဲတစ်ဆေ ပရလောကသားတှနေဲ့လဲကွုံဖူးတာပေါ့ကှာ…"
"ဒါပေါ့ ကောငျလေးရ…သိပျအခွောကျခံခဲ့ရဖူးတာပေါ့ …အဟား…ဟား…ဟား…ဟား"
ဦးဘတငျ့ကွီး၏ စကားအဆုံးတှငျ ရီလိုကျသညျ့အသံက ခွောကျကပျကပျနိုငျလှနျးနသေညျကို ကြှနျတျောသတိထားမိသညျ။
"ဘယျလိုမြား အခွောကျခံခဲ့ရတာလဲ ပွောပွပါလား…"
"အေး…ငါမှတျမိသလောကျတှပွေောရရငျတော့ ငါဒီဘူတာမှာစလုပျပွီး တပတျလောကျမှာဖွဈလိမျ့မယျ အဲ့မှာစအခွောကျခံရတာပဲ……
အဲ့ညမှာငါက တာဝနျအရရုံထဲလှညျ့ပတျစဈပွီးတော့ ငါ့အတှကျပေးထားတဲ့အခနျးလေးထဲဝငျထိုငျနတောပေါ့ကှာ…ပွီးတော့ထုံးစံအတိုငျးဆေးပေါ့လိပျဖှာနတေယျပေါ့…အဲ့ဒီအခြိနျမှာငါ့အခနျးရှကေို့လူတဈယောကျ ရောကျလာတယျ…
အဲ့ဒီအခြိနျကလဲ ဘူတာရုံထဲမှာ ရထားစီးမယျ့ခရီးသညျတှစြေေးသညျတှလေဲရှိတော့ ငါလဲအကူအညီတခုခုလိုလို့လာမေးတာထငျပွီး
ပထမတော့ ငါဇဝဝေါဖွဈသှားတယျ……ပွီးမှတဖွညျးဖွညျးပွနျစဉျးစားတော့ သူရပျနတေဲ့ တံခါးဝနဲ့ငါထိုငျနတေဲ့နရောက လေး ငါးပလေောကျဝေးနသေဟ…
တှေးနတေုံးပဲရှိသေးတယျ သူ့လကျကွီးကငါ့ဆီရှညျထှကျလာပွီးဆေးပေါ့လိပျပွနျပေးတယျ… ပွီးလဲပွီးရော ကြေးဇူးပဲနျောတဲ့ ပွောပွီးထှကျသှားပါလရေော…"
"အားပါးပါး……… ဦးဘတငျ့ကွီး အဲ့တုံးကမကွောကျဘူးလား"
"ဟ…ကောငျလေးရ… နောကျနငေ့ါ လနျ့ဖြားဖြားတာခှငျ့နှဈပါတျယူလိုကျရပါလရေောလား"
ဦးဘတငျ့၏ ဒုတိယအကွိမျမွောကျ အကျရှရှရီသံကွီးကွောငျ့ ကြှနျတျော ကွကျသီးမှေးညှငျးမြားပငျ ထသှားသညျ။
"အခြိနျကုနျတာကွာလို့ဆိုပွီး တှေးမနစေမျးပါနဲ့ကှာ "
"ဟငျ! ကြှနျတျောတှေးနတောကို ဦးဘတငျ့က ဘယျလိုသိတာလဲ…"
"ကောငျလေးရာ မငျးငယျပါသေးတယျ…ငါအသကျရဝကြျောနပွေီ…ငါလူပေါငျးမြားစှာနဲ့ကွုံခဲ့ဖူးတယျ အဲ့တော့ လူတှရေဲ့စိတျကိုလဲ မကျြနှာကွညျ့ရုံနဲ့ ခနျ့မှနျးတတျတာမဆနျးပါဘူးကောငျလေးရာ…"
ထိုသို့ပွောပွီးနောကျ သူ၏ ဆေးပေါ့လိပျအား တရှိုကျမတျမတျစှဲလနျးနှဈခွိုကျစှာ ဖှာရှိုကျနပွေနျလသေညျ။
ှီုီုဦးဘတငျ့ကွီးကို ဒီနကွေ့ညျ့ရတာအရငျနတှေ့နှေငျ့မတူ ထူးခွားနသေလိုကြှနျတျောခံစားနမေိသညျ။ဘာထူးခွားနသေညျတော့ ကြှနျတျောလဲပွောမပွတတျပေ။
ဂီးးးးးးးး ခနဲအျောမွညျကာ ပြံသနျးသှားသော ငှကျဆိုးတဈကောငျ၏ အသံကွားမှ ကြှနျတျော အသိပွနျဝငျလာသညျ။
"အေးလေ မငျးနဲ့ငါ စကားပွောနရေငျးနဲ့ ငါအပေါ့ခဏသှားတယျလေ…ငါပွနျလာတော့ မငျးအိပျပြျောနတောပဲ"
ခန်ဓာကိုယျအနှံ့အပွားမှလညျး နာကငျြကိုကျခဲမှု အခြို့ကို ခံစားနရေသညျ။ပိုဆိုးသညျကှီုးဘတငျ့ပွောသှားသလို သူအပေါ့သှားတာကိုလညျးကြှနျတျောမမှတျမိ။
ကြှနျတေျာ့စိတျထဲတှငျစဉျးစားနသေောအကွောငျးအရာကို ဦးဘတငျ့ကွီးသိနသေဖွငျ့ ဦးဘတငျ့အပျေါ မသင်ျကာဖွဈမိခွငျးပငျ…။
"ကြှနျတျော ကိုယျတှလေကျတှေ အရမျးကိုကျခဲနတေယျဗြာ…ပွီးတော့ ခေါငျးတှလေဲမူးနတေယျ…ဖြားခငျြနပွေီလားမသိဘူး"
"အိပျရေးပကျြလို့နမှောပါကှာ…ကဲ…ကဲ ကောငျလေး ၄နာရီကောငျဆိုကျတော့မယျ…အဆငျသငျ့လုပျထားတော့…"
နာရီကိုလှမျးကွညျ့လိုကျတော့ မနကျ၎နာရီထိုးဖို့မိနဈအနညျးငယျမြှပငျလိုတော့သညျ။ထို့ကွောငျ့ အခြိနျဆှဲမနတေော့ပဲ လကျမှတျဖွတျသောကောငျတာခနျးလေးအတှငျးမှ ကြှနျတျောထှကျလာလိုကျတော့သညျ။
မြားမကွာမီအခြိနျအတှငျး၌ ရထားဥသွဆှဲသံသဲ့သဲ့အား ကွားရလသေညျ။
မောငျထှနျးဇျောလေး တဈယောကျ ၄နာရီရထားဆိုကျပီးကတညျးက ပြောကျသှားလိုကျတာ ကြှနျုပျကျိုပငျ နှုတျဆကျမသှားတော့…
သူ့မိခငျနှငျ့တှေ့၍ ဝမျးသာအားရဖွဈကာ ကြှနျုပျအားဝငျနှုတျဆကျရနျမလြေ့ော့သှားခွငျးဖွဈနိုငျသညျဟုယူဆပွီး ကြှနျုပျလုပျစရာရှိသညျမြားကို လုပျကိုငျနလေိုကျလသေညျ။
ထိုအခြိနျ၌ လူတခြို့စုရုံးစုရုံးဖွဈကာ တစုံတခုအားအရေးတကွီးပွောဆိုနကွေသညျကိုတှမွေ့ငျရသဖွငျ့ ကြှနျုပျ၏ စူးစမျးတတျသော ဉာဉျအရ ထိုလူအုပျအနီးသို့ ခဉျြးကပျကာ နားထောငျကွညျ့မိသညျ။
"ဟုတျတယျဗြ…ထှနျးဇျောမှ ထှနျးဇျော အစဈပဲ…ကွံတောထဲမှာ သနေတော မွငျရကျစရာတောငျမရှိဘူး…"
"ဟုတျလိမျ့မယျဗြာ ကောငျလေးကတော့ သနားစရာပဲ ဘယျအခြိနျထဲကသနေလေဲမသိဘူး…သူ့ဦးလေးက သူ့အဈမ( ထှနျးဇျောအမေ) ကိုသှားကွိုတာကွာလို့စိတျမခလြို့လိုကျကွညျ့တော့မှ ကွံတောထဲမှာသနေတောတှတေ့ာတဲ့ဗြာ…"
ကြှနျုပျနှငျ့ညကတခြိနျလုံးစကားပွောနသေောထှနျးဇျောတော့ဖွဈဟနျမထငျ။ကြှနျုပျကိုယျတိုငျတောငျ ထှနျးဇျောအား တောဆငျနှငျ့တိုးမညျစိုး၍ အိမျမပွနျရနျတားမွဈခဲ့သေးသညျ။ထို့ကွောငျ့ သခြောစရေနျ မေးမွနျးကွညျ့လိုကျသညျ။
"လူလေးတို့…လူလေးတို့ပွောနတေဲ့ထှနျးဇျောဆိုတာ မွို့တကျပွီးသနပျခါးရောငျးတဲ့ မွကွညျရဲ့သားလား"
သူတို့ပွောနသေော ထှနျးဇျောက ကြှနျုပျနှငျ့ တညလုံးရှိနသေညျ့ ထှနျးဇျော…။
ဘူတာရုံသို့ တဈယောကျထဲလာခဲ့သော ထှနျးဇျော…။
ယခုတော့ ထှနျးဇျောမှာ ညကတညျးကပငျ တောဆငျနငျးခံရလို့သပွေီတဲ့…။
ဒါဆို…ဒါဆို …ကြှနျုပျနှငျ့ ညက တညလုံးရှိနခေဲ့သညျ ထှနျးဇျောက ………။
သွျော…ဒါ့ကွောငျ့မို့ သူညက ကြှနျုပျကို ပွောခဲ့တာကိုး …သူကိုယျတှလေကျတှေ အရမျးကိုကျနတေယျ ခေါငျးလဲ အရမျးမူးတယျတဲ့…
အခုကွားလိုကျရတဲ့ သတငျးက ထှနျးဇျောတဈယောကျ တောဆငျနငျးခံရတာ ခေါငျးလဲပှငျ့သှားတယျ ခါးလညျးထကျပိုငျးကြိုးသှားတယျတဲ့…။
"ကောငျလေးရေ…ငါပွုသမြှကုသိုလျကောငျးမှုတှမေငျးကို အမြှဝပေါတယျ…မငျးကွားရာအရပျကနေ သာဓုချေါပါကှာ……………
ဦးဘတငျ့ကွီး၏ ရုတျတရကျအပွုအမူကွောငျ့ ရပျစကားပွောနသေော လူတဈစုမှာ ဦးဘတငျ့ကွီးအား စိုကျကွညျ့နကွေလသေညျ။
ထိုလူတဈစုအပွငျ ဦးဘတငျ့ကွီးအားကွညျ့၍ ဝမျးသာအားရ သာဓုချေါနသေော တစုံတယောကျရှိနသေညျကို ဦးဘတငျ့ သိခဲ့ပါမူ………………………………………။ ။
ပွီးး ။ ။